ကုလ၌ အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စု အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ၁လကြာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းထမ်းဆောင် – Alanzayar
ကုလ၌ အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စု အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ၁လကြာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းထမ်းဆောင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းသည် အာရှ-ပစိဖိတ် အုပ်စု၏ အလှည့် ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ၁လတာကို အောင်မြင်စွာတာဝန် ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း မတ်လ ၁ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်
အဖွဲ့ဝင် ၅၄ နိုင်ငံပါဝင်သော အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စု၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁ မှ ၂၈ အထိ ၁ လတာထမ်းဆောင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းတာဝန်ကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏အမည် အက္ခရာစဉ်အလိုက် လစဉ်အလှည့်ကျ လွှဲပြောင်း ထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လတာအတွက် အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စု၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ ကြောင်းနှင့်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်” ဟု နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးက ထုတ်ပြန်သည်
ယင်းသို့ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းတာဝန်ယူစဉ် ကာလအတွင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ကျွမ်းကျင်သူများအဆင့် အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် အာရှ-ပစိဖိတ် အုပ်စု၏ လစဉ်အစည်းအဝေးကိုလည်းကောင်း သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြသည်…. လူထုနွေဦး Credit
ကုလ၌ အာရွ-ပစိဖိတ္အုပ္စု အလွည့္က်ဥကၠ႒တာဝန္ကို ၁လၾကာ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းထမ္းေဆာင္ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ အုပ္စု၏ အလွည့္ က်ဥကၠ႒တာဝန္ ၁လတာကို ေအာင္ျမင္စြာတာဝန္ ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း မတ္လ ၁ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္
အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္အုပ္စု၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၂၈ အထိ ၁ လတာထမ္းေဆာင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတာဝန္ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အမည္ အကၡရာစဥ္အလိုက္ လစဥ္အလွည့္က် လႊဲေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္လတာအတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္အုပ္စု၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ ေၾကာင္းႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္အုပ္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္” ဟု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္
ယင္းသို႔ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းတာဝန္ယူစဥ္ ကာလအတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ အုပ္စု၏ လစဥ္အစည္းအေဝးကိုလည္းေကာင္း သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္…. လူထုေႏြဦး Credit
Previous Article အရက်တောင်းသောက်သည့် လက်ပါးစေ ဗိုလ်မှူးကို အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် သတိပေး
Next Article ဒီကနေ့မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ